ကျွန်မ က “မြ” ပါ မောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ကျွန်မ က “မြ” ပါ မောင်	17
ကျွန်မ က “မြ” ပါ မောင်
Posted by မြစပဲရိုး on May 18, 2015 in Photography | 17 comments
ကျွန်မ က “မြ” ပါ မောင်။
. ရွှေ နဲ့ စိန် မဟုတ်ပါဘူး မောင်။
FB ထဲ သူများ တွေ ” မောင်” နေတာ နဲ့ ခေတ်နောက်မကျ ရလေ အောင် ဒီမှာ ဝင်ပြီး ” မောင်” လိုက်ပြီ။
မောင် = MG = Myanmar Gazette
ဟိ … lol:-)))))
ကျွန်မ က မြ ပါ မောင် …. ပန်းလေး တွေ ကိုတော့ ကြည့်သွားလိုက်ပါဦး။
ဇီကလေး ပြောတဲ့ camomile အမျိုး ထင်ရဲ့
ချစ်မ ရဲ့ ၁၁ကျပ် ပန်းမျိုးဘဲ ထားပါတော့ သူလဲ ငိုက်စိုက်ကျနေတာ :-)
ပန်း ရဲ့ လိပ်ပြာ
ဝိုင် ရဲ့ အစ
ဒါကလဲ ၁၁ကျပ်ပန်းမျိုး ထဲ ကထင်ရဲ့
အိမ်ဖြစ် ပဲ ပင်
ခင်ဇော် says: ကျမ အရှုပ်လုပ်နေတယ်မှောင်..!!
အာ့ camomile ဟုတ်သေးးဘူးး
သများးဆီမှာ ရိုက်လာတာ တပုံ ပဲရှိလို့ ရှာနေတုန်းးး
ခု ဒီပုံ သုံးးပြီးး ထပ်ရှာရမယ် ညင်းးညင်းးး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2283
Ma Ei says: 1ပန်းဝါ၀ါလေးကလှလိုက်တာ..
စပျစ်ခင်းနဲ့ ကျူးးလစ်ပန်းခင်းလဲ ကြည့်ချင်တယ်..
နှင်းပန်းလေးလဲ အခင်းလိုက်ဆို လှမလားဘဲ…
မြ ဓာတ်ပုံလေးတွေ အရမ်းလှ…
မြစပဲရိုး says: ညီမအိ – ဒီက စပျစ် က စင် နဲ့ ထိုးပြီး နွယ်တက် စိုက်ထားတာ။ :-)
Ma Ma says: ၁၁ ကျပ်ကျတဲ့ပန်းမျိုးစိတ်သစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိသူ
ဘော်မနီ မမ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မောင် မောင် မောင် မောင် တွေ တွေ့နေရတာ ရွာထဲပါ ကူးစက်လာပြီ။ ခိခိ။
Mike says: .MG ကြီးမိုက်လည်း ၀င်ကျိသွားပါတယ် မြ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
စိန်ပလိန်တိန် မုန့်ကြိုးလိမ် says: ရန်ထောင်တတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းကြီးတောင် ဖြစ်ချင်လာပီ။
ကျမက နှင်းဆီပါမောင်ကြီးက ရန်ထောင်တဲ့ နေတိုးလို နှုတ်ခမ်းကြီးတောင် အာဘွားပေးတယ်ဆိုတော့
တို့လို ထော်ထော်ထူထူး ထော်လန်ကွေး နှုတ်ခမ်းပါ မောင်လို့တောင် ပြောခံချင်လာပီ။
ဖွေးလေးနဲ့ တစ်တန်းထဲ တက်ခဲ့ကြဒါလေ.. ငိ..။ ခုဒေါ့ သူက နှင်းဆီ ဖြစ်..
ဒီကတော့ ဒညင်းသီဖြစ်နဲ့.. ဘွတွေများ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinsett @ Maung Thura says: ကျနော်က “ဆက်ဆက်”ပါ… မြ
​ဒေါ် လေး says: ကျွန်​မက ​၄ ပါ​မောင်​
၆ ​ရောင်​ မက စုံလင်​လှတဲ့ ပန်း​လေး​တွေကို
၇ စင်​ကြယ်​ ကို​ငေး​မောကြည့်​​နေသလိုဘဲ
၈ ဆ ​လောက်​ခံစားပြီး
၁၀ ပုံလုံးကြည့်​သွား ပါတယ်​လို့
ကြောင်ဝတုတ် says: ပန်းတွေရိုက်ဖို့ Close Up Set မှာထားတယ်…
မြစပဲရိုး says: မနေ့ က အဲဒီ “မောင်” ရာဇဝင် ကို မသိဘဲ ရီဖို့ ကောင်းလို့ ဘုမသိ ဘမသိ တင်လိုက်တာ။
အခု တော့ “ဖွေးဖွေး” ရဲ့ ဇာတ်ကားပါလား ဆက်ဆက်ရယ်။
အဲဒီ အပိုင်းလေး ကြည့်ရုံ နဲ့ အတော်လေး ကို စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်း တဲ့ မြန်မာကား တစ်ကား ပေါ်လာပြန်ပြီ လို့ သိလိုက်ပါတယ်။
Feeling – ၁၁ကျပ်ကျ (cd – ချစ်မမ) ဝင်အားပေးသူများ အားလုံး ကျေးဇူးပါ။
. ဒေါ်လေး မှတ်ချက် ကို ကြိုက်ပြန်ပြီ မို့ စိမ်းပါတယ်။ :-))
kai says: မောင်… တို့ရဲ့အစ…
weiwei says: နောက်ကျနေပေမယ့် ၀င်ကြည့်သွားပါတယ် ..
ကျွန်မက ပန်းချစ်သူပါ မောင် ….
တောင်ပေါ်သား says: ကျနော်က ဗိုလ်အောင်ဒင် မဟုတ်ပါ မြ
ဟီး ဟီး စတာနော် ခရမ်းရောင်ပန်းလေးး ကြိုက်တယ်
မြစပဲရိုး says: ပန်းချစ်သူမှန်း မောင် သိပါတယ် ပန်းတွေ နဲ့ ဝေ။ :-))
ဗိုလ်အောင်ဒင် မဟုတ်ရင် ကိုကိုချစ် ပေါ့ :-))
manawphyulay says: ပန်းတွေ လာကြည့်သွားပါတယ် ညောင်.. အဲလေ မွှားလို့ မောင်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပန်းမကြိုက်ပေမယ့်ပန်းတွေအမြဲရိုက်ဖြစ်တယ်